Vaovao - Manohana ny vidin'ny famoahana eropeana ny vidim-piainana miakatra
Manohana ny vidin'ny famoahana eropeana ny fiakaran'ny vidim-piainana
Ny fiakaran'ny vidim-piainana maotina sy ambany dia napetraky ny mpamokatra rebar any amin'ireo firenena eropeana Andrefana, amin'ity volana ity. Ny fanjifan'ny indostrian'ny fananganana dia mijanona ho salama hatrany. Na eo aza izany, marihina ny tsy fisian'ny fifanakalozana be dia be ary mitohy ny ahiahy momba ny Covid-19.
Ny fikosoham-bary alemanina dia mametraka ny vidin'ny vidiny
Ireo mpamokatra rebar any Alemanina dia mametraka ny vidin'ny vidin'ny € 200 isaky ny taonina. Mills dia mitatitra boky famandrihana tsara, ary ny fotoana itarihana dia eo anelanelan'ny efatra sy enina herinandro. Somary latsaka ny fividianana, fa ny hetsika kosa dia tokony halaina mandritra ny volana ho avy. Ireo mpanamboatra trano dia mihaona amin'ny tombam-barotra voafintina satria mbola hampiakatra ny sandan'ny varotra izy ireo.
Ny tanjaky ny fananganana belza no nalaina am-bavany
Any Belzika, ny sanda fototra dia mitombo noho ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny mpividy dia mety hanaiky fandrosoana bebe kokoa, mba hahazoana fitaovana. Na izany aza, mpikirakira maro no tsy manome taratra ny vidin'ny fanoloana ny vidin'ny varotra vokariny.
Ireo mpandray anjara amin'ny famatsian-tànana dia samy manana ny heviny momba ny tanjaky ny sehatry ny fananganana. Manahy ny mpitantana ny fividianana fa mety hihena ny fangatahana amin'ny faran'ny taona raha tsy mivoaka ny tetikasa vaovao.
Fanantenan'ny fampiasam-bola ataon'ny governemanta any Italia
Ireo mpanamboatra rebar Italiana dia nametraka fiakarana antonony amin'ny volana septambra. Fanamarihana ambany dia ambany ny amin'ny sehatry ny fananganana anatiny. Misy ny fanantenana fa ny fampiasam-bolam-panjakana dia hampisondrotra io ampahany io ao anatin'ny fotoana fohy. Ny mpividy kosa dia manohy mividy am-pitandremana. Mbola mitohy ny olana ara-toekarena ao anatin'ny valanaretina Covid-19.
Ireo mpivarotra italiana dia afaka nampiakatra ny sandan'ny varotra, tamin'ity volana ity, natsangan'ny fiakaran'ny fironana iraisam-pirenena. Na eo aza izany, voafetra ihany ny programa fividianana fikosoham-bary eto an-toerana.
Ny fikolokoloana dia mampihena ny vokatra Espaniola
Niovaova ny soatoavina fototra rebar Espaniola tamin'ity volana ity. Nihena ny vokatra noho ny programa fikolokoloana fikosoham-bary, saingy ny tsy fahampian'ny orinasa marobe dia marihina. Miandry ny fahazoana ny teny nalaina avy tany amin'ny orinasa fananganana Gallardo Balboa teo aloha, izay miorina ao Getafe, ny mpividy, izay vao nalain'ny vondrona Cristian Lay.
Miasa tsara ny asa eo amin'ny sehatry ny fananganana. Nikatona ny toe-java-misy any amin'ny indostria sisa tavela, vokatry ny tetikasa nihemotra sy ny tsy fisian'ny fanapaha-kevitra eo afovoan'ny valanaretina coronavirus.
Tct Circular Saw Blade Fa Metal, Tct Circular Saw Blade, Hss M35 Boribory Saw Saw, Hss M2 Boribory Saw Blades, Fitaovana fiasan-damba mafana vita amin'ny vy vita amin'ny vy, Tct Boribory Saw Saw,